Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Isebe likarhulumente wase-US: Sukuya eCanada
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iingcebiso zokuhamba zakutshanje ezikhutshwe liSebe likaRhulumente wase-US, ziphucule iCanada ukuya kwinqanaba le-3, elithi 'Phinda ujonge uhambo'.
Abemi baseMelika balumkisa ukuba bangayi eCanada.
Isebe likaRhulumente wase-US liphakamisa inqanaba lokucebisa eCanada ukuya kwi-3.
Ukuhamba phakathi kwe-US ne-Canada akunconywanga ngenxa yesifo esiqhubekayo se-COVID-19
I-United States Isebe likaRhulumente linyuse inqanaba lokulumkisa abantu baseMelika abaya eCanada, beluleka bonke abemi baseMelika ukuba baphinde bacinge ngokuya kweli lizwe phakathi kobhubhane oqhubekayo we-COVID-19.
The KwiSebe leSebe laseUnited States ikhuphe ingxelo isithi iphinde yahlulahlula iingcebiso zokuhamba ukusuka kwiNqanaba 2- "sebenzisa ulumkiso" - ukuya kwinqanaba le-3 - "Cinga ngohambo"- kwiingcebiso zeCDC, ngenxa" yenqanaba eliphezulu le-COVID-19 eCanada. "
Isebe likaRhulumente wase-US, kunye ne Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC), Ubuye walumkisa ngokuya eSwitzerland, phakathi kwamanye amazwe ngenxa yokunyuka kwamatyala amatsha osulelo lwe-COVID-19.
Kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo, ngaphezulu kwe-21,000 yamatyala amatsha e-COVID-19 axeliwe eCanada. Kwangelo xesha, ngaphezulu kwe-900,000 yamatyala amatsha e-COVID-19 abhalwa kwiveki ephelileyo e-US, ngokweCenters for Disease Control and Prevention (CDC).
Apho kwaye Uzenza nini ii-VIP eziphezulu kwiMarike yokuHamba yeHlabathi...
Tim Anderson uthi:
Agasti 31, 2021 kwi-14: 19
Hmmm. Nge-apx ye-10% yabemi base-US, ngaphezulu okanye ngaphantsi sisebenza kumgaqo we-10% kwizinto ezininzi zokucinga.
Ukuba iCanada inamatyala angama-21,000 ama-Covid, i-US kufuneka ibe ne-apx 210,000 kuphela kodwa kukho i-900,000.
Kuvakala ngathi abantu baseCanada akufuneki baye e-US>